Nbudata HMS Bounty FSX & P3D & FS2004 - Rikoooo
Ihe omuma nke HMS Bounty FSX & P3D
downloads 19 332
Emelitere na 11 / 01 / 2019 : NUMdị 2.0 ọhụrụ FSX dakọtara Prepar3D v4. Mara: FSUIPC Achọghị ka HMS Bounty rụọ ọrụ. Ejiri koodu 64-bit maka P3DNdị ọrụ V4 +
HMS Bounty 18th Century Tall Ship square rigger kpamkpam ifufe na-ekpuchi, onye ọ bụla animated ma na-achịkwa ụgbọ mmiri, flags animated na ntụziaka na ọsọ ọsọ ọsọ, hel ọsọ, na Sail Management Window iji chịkwaa ọrụ ụgbọ mmiri niile. Ụgbọ mmiri na-agbaso ọsọ ọsọ na ntụziaka na mgbanaka, ịkụ ọkụ, na pitch dabere na ụgbọ mmiri na-etinye na ogwe aka ogwe aka. Mmetụta ụda, ikuku na-agbanwe agbanwe na ụda mmiri ozuzo, mgbịrịgba ụgbọ mmiri, "Kelee", arịlịka na-atụfu / tinye ihe niile tinye na nmikpu.
DỊ mKPA: Gụọ akwụkwọ "HMS Bounty Replica.pdf" nke dị na gị Documents nke "Windows" iji mụta otu esi ejikwa ụgbọ mmiri ahụ.
Mara: Ekwesịrị ịtọ ntọala Realism ka ọ bụrụ "Ihe siri ike" maka Mmetụta ikuku kachasị mma (agaghị arụ ọrụ na "Ọdịdị" eziokwu dị na FSX.)
HMS mmesapụ, a makwaara dị ka HM ogba Arịa mmesapụ, bụ obere ahia arịa zụrụ site Royal n'Òtù Ndị Agha Mmiri n'ihi na a botanical ozi. The ụgbọ mmiri, n'okpuru iwu nke William Bligh, e zigara ya na Pacific Ocean iji nweta breadfruit osisi na ibufe ha ka ha British onwunwe na West Indies. Na ozi na ọ dịghị mgbe dechara, n'ihi na a mutiny edu aghọ Lieutenant Fletcher Christian. Nke a bụ ihe a ma ama Mutiny na mmesapụ.
Onye edemede: Milton Shupe, Nigel Richards, Rob Barendregt, Sasha Rieger, na Rob Ibey